महिलो कछाड, चप्पलविहीन पैताला, घेरा फाटेको टोपी, दारी बढेको अनुहार, महिलो भोटो, गाईवस्तुको भकारो हरक आउने हातगोडा र निधारमा शालिग्राम पुजा गरेको चन्दन लगाएर गाउँबेसी खुब गरे काम केसीले । एउटा मात्र छोरा थियो सन्तानको नाउँमा केसी दम्पत्तीको । त्यसलाई हुर्काउन बढाउन र पढाउन धेरै दुःख गरे तिनले  । भारो पर्म गरेर भए पनि एउटा छोरा हुर्काए र उच्च शिक्षा हासिल गराउन सक्षम भए  । बिचरा ती दुवै आफैं भने निरक्षर थिए तर पनि शिक्षाको महत्व कति धेरै बुझेका तिनले। छोरा तिनको सपना थियो । ऊ शिक्षित भयो भने हाम्रो भविष्य त उज्यालो भैगो नि भन्थे । रातो दिन मिहिनेत गर्थे । कहिलेकाहीँ श्रीमान/श्रीमती आ –आफ्नो मनको कुरा सेयर गर्थे । गाउँकै स्कुलमा पढे पनि विवेकले एसएलसी उच्च अंकले पास ग-यो । गाउँका दुई जना साथी अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गएका थिए। उसको पनि अस्ट्रेलिया पढ्न जाने सपना थियो । उसको सपना साकार पार्न उसको बाबु–आमाले के मात्रै गरेनन् । भैँसीको घ्यु बेचेनन् कि, बारीको फलफुल बेचेनन् कि, दुध ! अन्नपात बेचेनन् कि लेकको न्युरोसम्म टिपेर बेचे । गोठका खसी बोकादेखि कुखुराको अन्डासमेत बेचे । सबले भात खाँदा तिनले चामल बेचे । ढिँडो खाए । प्लस टु ग-यो छोराले प्रथम श्रेणीमा । त्यो दिन जस्तो आनन्दको दिन कहिल्यै भएन तिनलाई । छोराको काठमाडौंमा एउटा कोठा छ । पहाडबाट सामल लिएर कहिले कमला आउँथिन् कहिले कमल आउँथे । हरेक हप्ता हप्तामा दुई जना आलोपालो गरी आउँथे । छोरा आफ्नो सपनाबाट डेग चलेन । ऊ आफ्नो सपनाको देश अस्ट्रेलिया नगई नछाड्ने भयो । तिनले त यतै नेपालमै अध्यन गर यहाँ पनि ग-यो भने के हुँदैन र भनी सम्झाउँथे तर छोराको हटको अगाडि उनीहरू हारे ।
मान्दै नमानेपछि गाउँको एउटा धान फल्ने खेत बेचिदिए । १० लाख आयो । उसको एक वर्षको कलेजको फि मात्रै १७ लाख रहेछ । सबै गरेर २५ लाख लाग्ने रहेछ । श्रीमतीको सबै गहना बेचे। कमलाले घाँटीको तिलहरीदेखि नाकको फुली कुलो लाग्ने धान खेतदेखि गोठका दुहुनु भैंसी बेच्दासम्म जम्माजम्मी १२ लाख मात्रै भयो । बाँकी पैसा जम्मा गर्न सकेनन् तिनले छोराको ‘आइएलटिएस’को नतिजा पनि आयो । अलिकति छात्रवृत्ति पनि पाएछ कलेजबाट । अब टिकट खर्च र होस्टेल चार्ज गरेर आठ लाख जति मात्रै नपुग्ने भयो । कन्सल्टेन्सीले छोरालाई सोध्यो कोही केटी साथी छ भने डिपेन्डेटेनमा लैजानू भनेर । तिनका छोराको नभन्दै एउटा केटी साथी रहेछ । ऊ पनि जानी भइन् छोरालाई समेत खर्च हालेर । कमल कमला दङदास परे । दुःखै नगरी बुहारी पनि भित्रिनी भइन् भनेर । बिहे नै गर्न पर्ने रहेछ बाजै बजाएर बिहे पनि गरे भिडियो पनि खिचेर फोटो पनि खिचे भिसा प्रोसेसका लागि जग्गेमा आगो पनि बाले जन्ती पनि गए कसैले भन्दियो सुहागरात पनि मान्नुपर्छ रे ! सुहाग रात पनि माने ख्यालख्यालको बिहे भन्ठानेथें साच्चिकै पो रहेछ बुहारी पाएर कमला दंग परिन् भिसा आयो दुवै जना अस्ट्रेलिया गए ती रित्ता भए एउटा सपना त पूरा भयो तिनको छोरा बुहारीलाई बिदाइ गरेर ती गाउँ गए । एउटा धान खेत थियो त्यो पनि अब रहेन गोठमा हेर्दा गाईवस्तु पनि थिएनन् भकारीमा धान पनि थिएन खोरमा कुखुरा र खसी बोका पनि थिएनन् र पनि तिनीहरूसँग एउटा जाँगर थियो । तिनीहरूसँग सपना थियो र साथमा थियो छोराको माया ।
१) तृष्णा र अर्पण अस्ट्रेलिया पुग्छन्
कलेज पढ्दा नै तिनको मन अलिक साटिएको थियो । प्रेम झाँगिन बाँकी भने थियो । तृष्णा अलिक आधुनिक थिइन् । तर पढाइ चाहिँ ठिकै थियो । बाबुआमाले पुलपुल्याएर पालेकी छोरी । मोडलमा अलिक चासो थियो । उनले पैसा मात्रै हालिन् । बाँकी केही गर्न परेन । जग्गेमा केही फनको । आखिर सुहाग रात पनि भयो । अर्पणले चाहिँ भित्री मनले माया गरेको थियो तृष्णालाई उसले सिरियसमै बिहे ग-यो र पछिसम्म मेरो यिनै हुन् जीवन सङ्गिनी भन्ने सोच बनायो । तर तृष्णा यो बिहेलाई गम्भीरपूर्वक लिएकी थिइनन् । पैसाले किनेको बिहे त हो नि भोलि जे पनि हुन सक्छ भन्ने दोधारमा थिइन् । पढाइ सुरु भएको थिएन । उनीहरू दुवै नयाँ संसारमा मस्त घुम्न थाले । नेपालबाट पहिलो चोटि विदेश पुगेका ती दुवै । निकै स्वतन्त्रताको महसुस गर्न थाले । दिनभर दिनभर घुम्न थाले । नेपालीहरुको सर्कलसँग भेटघाट हुन थाल्यो । अर्पण त्यति धेरै रमाउन सकेको थिएन । उसलाई होम सिक भइरहेको थियो । एक दिन टाउन हलको केएफसिमा हरिलाई भेट भयो । हरि पहिलेदेखि नै अस्ट्रेलिया बसेकोले उसलाई त्यताको बारेमा सब थाहा थियो । उनीहरू हरिसँग बसेर सँगै खाजा खाए ।
हरिसँगको संगत बाक्लो हुँदै गयो । अर्पण र तृष्णाको कोठामा आउन थाल्यो ऊ । हरि आधुनिक रवाफिलो सहयोगी थियो तृष्णा र हरि अनि अर्पणबीच घनिष्ठ दोस्ती भयो । अर्पणको कलेज सुरु भयो काम चाहिँ मिलेको थिएन अर्पण कलेज जान थालेपछि तृष्णा एक्लै हुन्थी एक्लो भएको कारण ऊ हरिलाई कोठामै बोलाउँथी उनीहरूबीच साथीभन्दा पनि माथिल्लो सम्बन्ध कायम भयो । अर्पणलाई हरि र तृष्णाबीचको सम्बन्ध थाहा थिएन । तृष्णा र हरिसँगै घुम्ने खाने बस्ने गरेको अर्पण लाई थाहा भयो अर्पणले केही बोल्नु सकेको थिएन र ऊ अध्यनलाई नै बढी महत्व दिन्थ्यो । सुरुसुरुमा तृष्णा अर्पणलाई खाना बनाउँथी आजकल ऊ आफैं बाहिर हरिसँग खान्छे आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्रता चाहिन थाल्यो तृष्णालाई अर्पणको अंकुश र नियन्त्रण तृष्णालाई मन पर्दैन तृष्णा राति–राति आउन थाली तृष्णा पेट बोक्छे सुत्केरी स्याहार्नका लागि उसले आफ्नो आमा–बाबुलाई बोलाउने योजना गर्छे । अर्पण आफ्नो आमा–बाबुलाई बोलाउनु पर्छ भन्छ दुई जनाबीच हानथाप हुन्छ । झगडा हुन्छ । अर्पणलाई तृष्णाको चरित्रमा शंका लागेको थियो नभन्दै त्यस्तै भयो तृष्णा कोठा छोडेर हरिसँग बस्न गई । अर्पण अब एक्लो भयो ऊ पढ्ने कलेजमा एउटी केटी साथी थिइन् कविता अर्पणसँग असाध्यै मिल्थिन् । अर्पणले पनि उसलाई मन पराउँथ्यो तर आफू बिहे गरेर आएको डिपेन्डेन्डमा तृष्णा आएको कुरा भनेको थियो । तृष्णाले धोका दिँदै गरेको कुरा पनि भनेको थियो । तृष्णाले आफूलाई धोका दिएको कुरा गरेपछि कविताले झन बढी माया गर्न थाली अर्पणलाई । हप्तौंपछि पनि तृष्णा सम्पर्कमा आइन अर्पणको ऊ पनि कविताको मायामा मोहित हुन थाल्यो । हरिसँगै बस्ने कुरा गरी तृष्णाले ।
२) तेल भिषा
कोठा भाडा खाई खर्च महँगो थियो । अर्पणले काम पाएको थिएन ऊ कामको खोजीमा निकै दौडधुप गर्न थाल्यो एकदिन टाउन हलमा उसले तृष्णालाई र हरिलाई भेट्छ बोलचाल हुन्छ । तृष्णासँग रिसाउँछ । हरिले अर्पणलाई जागिर खोजिदिएको कुरा गर्छ तर अर्पण कसैले खोजिदिएको जागिर खाइँदैन भन्छ । अर्पणसँग कविता पनि सँगै थिई तृष्णाले सोधी कविताको बारेमा र सम्बन्धको बारेमा अर्पणले जवाफ दियो तिमी र हरिबीच के सम्बन्ध छ मेरा पनि कवितासँग त्यही सम्बन्ध छ भन्छ । सुत्केरी हुने दिन नजिक आयो त्यही निहुमा अर्पणले बुबालाई बोलाउन पेपर पठायो तृष्णाले उसको आमालाई बोलाउन पेपर पठाइ उता दुई सम्धी सम्धिनाको भिसा लाग्छ ।
३) काठमाडौं र दुर्ई सम्धी–सम्धिना
सल्लाह गरेजस्तो दुवै जना एयरपोर्टमा भेटघाट गर्छन् बिहे गरेपछि दुई सम्धीसम्धिनीको भेटघाट नै भएको छैन भन्दै देख भेट गर्छन् । रमाइलो हुन्छ दुवै जना नातिनी हुने हो कि नाति हुने हो भनेर गफ गर्छन सम्धी (कमल केसी) बुहारीले एउटा नाति पाइदिए भने गज्जब ।
४) अस्ट्रेलिया पुगेपछि
दुवै एयरपोर्ट लिन गएका हुन्छन् तृष्णासँग अर्कै केटा हरि हुन्छ र उसको पेट ठूलो देखिन्छ । अर्पणसँग अर्कै केटी कविता हुन्छे दुवै सम्धी–सम्धिना अचम्मित हुन्छन् अर्पण कविता र कमल केसी एउटा ट्याक्सीमा हरि तृष्णा र आमा अर्कै ट्याक्सीमा
५) फरक परिवेश फरक अनुभूति
अर्पण र तृष्णा उताबाट बिहे गरी आए पनि अस्ट्रेलिया आएपछि अलग देखिनुले दुई सम्धी–सम्धिना अचम्मित दुवैको फरक बसाइ र फरक साथी चयनले दुवै कन्फ्युज दुवै जना सुत्केरी स्याहार गर्ने भिसामा आएका अर्पणले बाबुलाई तृष्णाको बारेमा अवगत गराउँछ तृष्णाले अर्पणको बारेमा उसकी आमालाई अवगत गराउँछे दुवैले एकले अर्कालाई नराम्रो कुराहरू गर्छन् अर्पणले अब कवितालाई बिहे गर्ने प्रस्ताव बाबुलाई भन्छ तृष्णाले हरिसँग बिहे गर्ने कुरा आमालाई भन्छे हरि र तृष्णा आधुनिक हुन्छन् कोठामा नेपाल बाट गएकी आमालाई एक्लै छोडेर एक दुई दिन नै आउँदैनन तिनीहरू आमा कोठामा बिचलित हुन्छिन् । बाहिर घुम्न जान पनि नचिनेको परिवेश । भाषा पनि नआउने आमा धेरै दुखी हुन्छिन् यता अर्पण र कविता काममा जान्थे दिनभर कमलजीलाई समय बिताउन गाह्रो । छटपटी बन्दना र हरि पहिलासँगै बसेका भनेर रहस्य खुलेको हुँदैन ।
६. कथा वन्दनाको
म वन्दना । सामान्य परिवारमा जन्मिएकी थिएँ । मेरो आमा–बाबाको म एक्ली छोरी । म जम्नेपछि मेरा बाबा–आमालाई खान लाउनसम्म पुग्ने भयो रे । घरमा लक्षिन ल्याएकी थिएँ रे मैले । उहाँहरुको म सपना थिए । अरु सन्तान जन्माउने उहाँहरुलाई कुनै इच्छा नै भएन । उहाँहरुले नमीठो खाएर भए पनि मलाई मीठो खुवाउनु भयो । प्लस टु सकेपछि म पनि मेरा बा आमाको सपना साकार पार्न अस्ट्रेलिया गएर अध्ययन गर्ने आफ्नो करिएर बनाउने पैसा कमाउने र देशमा थोरै भए पनि आफूले सक्दो सामाजिक योगदान दिने विचार गर्नथाले । हो मलाई मेरो बाबा–आमाले १८/२० लाख खर्च गरेर पढ्न पठाउन सक्ने कुरा पनि थिएन । छात्रवृत्ति मिलाउनको लागि आइएलटिएसमा राम्रो स्कोर आउनु जरुरत थियो । मैले धेरै मिहिनेत गरे र भाग्यवश मेरो ७.५ स्कोर आयो । एउटा कन्सलटेन्सीको सहयोगमा मैले अलिकति छात्रवृत्ति पाए र बाँकी पैसा बाबाले ऋण लिनुभयो । र म अस्ट्रेलिया गएँ । अस्ट्रेलियामा मेरा आमाका माइती पट्टिका कोही आफन्त थिए । हरि उहाँ पनि अध्ययनकै लागि गएका थिए । मलाई उहाँकै जिम्मामा पठाइयो । म सिडनी पुगेपछि उहाँसँग बस्न थाले ।
कलेज सुरु भएको थिएन । कोठा एउटा मात्रै थियो । अस्ट्रेलियाको समाज बिल्कुलै फरक थियो । केही दिन त म आफैं कन्फ्युज भएँ  । हरि दिनभर काममा गएर फर्किन्थ्यो । म घरमा हुन्थेँ । ऊ भोकाएर आउँथ्यो । म उसलाई खाना बनाएर राक्थे । हामी बस्दै गयौ एकले अर्कालाई बुझ्दै गयौं । म एउटा साँगुरो चिन्तनबाट अलि फराकिलो मनस्थितिमा पुग्न थाले । हामीमा सबैकुरा सेयरिङ हुनथाल्यो । यसमा हरिको भूमिका अहं छ । हामीबीच शारीरिक सम्पर्क पनि भयो । हरि कलेज बंक गरेर बाँच्नको लागि यौन शोषणमा परेको थिएँ । म आफ्नो करियर विकासको लागि गएको थिएँ तर परिस्थिति त्यस्तो बन्यो । कलेज सुरु भयो । दिनको डेढ घण्टा रेलमा चढेर कलेज जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा म तनावग्रस्त थिएँ । कलेजमा एक जना नेपाली भेटिए इन्द्र  । नेपालीबीचको सम्बन्ध त्यति राम्रो भएको देखेकी थिइनँ मैले । कलेज टाढा भएको र उतै काम पनि पाएकोले मैले उतै बस्ने आशय व्यक्त गरेँ हरिसँग । हरि आफ्नो काममा व्यस्त थियो । उस्ले पनि सहमति दियो । म सामान लिएर उतै इन्द्रको कोठामै गए किनकि त्यहाँ इन्द्रको आफ्नै गर्ल साथी थिई । म धेरै मिहिनेतका साथ अध्ययन गर्न थालेँ । इन्द्र र उसको जापानिज केटी साथी प्रेममा थिए । म भान्सामा सुथ्थे । काम गर्थे  । कलेज अध्ययन गर्थें । उता हरिसँग छुट्टिएर आएपछि मेरो महिनावारि रोकियो । हरिलाई फोन गरेर सुनाए । कि म यो बच्चा एबोर्सन गरेर फालिदन्छु । तर बच्चा फाल्नका लागि दुवैको सहमति आवश्यक र कानुनी समस्या पनि रहेछ । हरिले बच्चालाई नफाल्नुमा हामी दुवैको कल्याण देख्यो । हरि म बसेको कोठामै आयो मलाई सम्झायो गयो । यासिराको पढाइ सकियो । ऊ आफ्नै देश जापान फर्किई । यासिरा जापान गएपछि इन्द्र र म मात्रै भयौ अब त्यो अपार्टमा ।
जागिर र पढाइको कारणले पनि म त्यो ठाउँमा बस्न बाध्य भएँ । त्यहाँ जाँदा मिन्स रोकिएको भए पनि मिन्स भएको जानकारी दिएकी थिएँ मैले इन्द्रलाई । अस्ट्रेलियामा उसो त यो कुराको मतलव पनि हुँदैन थियो । यासिरा मिन्स बार्दैनथी । मेरो पेट बढ्दै गयो । इन्द्रले सोच्यो यो उसकै बच्चा हो भनेर । ऊ खुसीले दङ प-यो । ऊ आफैं अस्ट्रेलियामा इलेगल भइसकेको थियो । बच्चाको माध्यमबाट उसले आफूलाई लिगलाइज गर्ने सपना देख्न थाल्यो र अस्ट्रेलियाको कानुनअनुसार मलाई कोर्ट म्यारिज गर्न दबाब दिँदैथ्यो । पहिलो सेमेस्टरमा कलेज टप भएँ  । कलेज टप गर्दा मेरो पेटमा छ महिनाको बच्चा भइसकेको थियो यहाँ समस्या के प-यो भने इन्द्र यो पेट उसको भनेर दाबी गर्ने र इन्द्र यो पेट मेरो हो भनेर दाबी गर्ने र मलाई मात्रै थाहा थियो यो कसको हो भनेर । बच्चालाई जन्म दिएँ । हुर्काएँ । धेरै मिहिनेत गरें । दुवैबाट अलग बसेँ । मेरो अध्ययनको कारण कलेजबाट पिआर एप्लाई गरेँ केही महिनामा मेरो पिआर भयो ।म इन्द्रसँग पनि बसिन र हरिसँग पनि बसिन । बच्चालाई स्याहार्नु पर्नेभयो । विगत पाँच महिनादेखि बच्चाको कारण मैले काम गरिरहेको थिइन् । कोठा भाडा र ग्रोसरी किन्नलाई समेत मलाई गाह्रो परिरहेको थियो । हरि र इन्द्र दुवैको सहयोग पाइरहेकी थिएँ । इन्द्रले सहयोग गरेको हरिलाई सह्यै हुँदैनथ्यो । म बीचमा थिएँ । दुवैले बच्चालाई आ–आफ्नो भनेर दावी गरिरहेका थिए । इन्द्रमा पिआरको स्वार्थ थियो ।
एकदिन छोरा कोठामै खेल्दै थियो । म बाथरुममा कपडा धुँदै थिएँ । इन्द्र रुममा आएर बाबुलाई अपहरण शैलीमा छोरालाई उसको कोठामा लिएर गएछ । बाबु नदेखेपछि । म चिच्याएँ र हरिलाई फोन गरे । हरि आएपछि उसले प्रहरीलाई फोन ग-यो । प्रहरी रुममा आयो । प्रहरीले आफूलाई शंका लागेको मान्छे कोही छ भने भन्नुस भन्यो । मलाई इन्द्रप्रति शंका थियो तर भनिनँ । प्रहरीले रिपोर्टिङ लिएर गयो । हरि र म इन्द्रको रुममा गयौँ । बाबुलाई उसले लिएर गएको रहेछ । हामी त्यहाँ पुग्दा छोरा रोइरहेको थियो । छोरा पाएपछि म खुसी भएँ । हामी तीन बीच निकैबेर झगडा भयो । इन्द्रले मेरो छोरा मेरो अधिकार जिकिर गर्थ्यो । यता हरि मेरो छोरा हो भनेर दाबी गर्छ । अन्ततः डिएनए टेस्ट गर्नेसम्म कुरा भयो । मलाई इन्द्र देखेर घृणा लागेर आयो । त्यो दिन धेरै झगडा भयो हरि र इन्द्रबीच । हरिले इन्द्रको बारेमा प्रहरीलाई रिपोर्टिङ ग-यो । इन्द्र बच्चा अपहरणको कारण जेल प-यो । मैले बच्चालाई अस्ट्रेलिया नराख्ने विचार गरें । हरिले उसैको कोठामा जाउ भन्यो । मैले आफ्नो स्वाभिमानको कारण पनि उसको रुममा जान मानिनँ । त्यही हप्ता म बाबुलाई लिएर नेपाल आएँ ।
ब्याचलरमा राम्रो नम्बरमा पास गरेपछि अब मैले डिग्री पढ्नु जरुरी थियो । छोरा साथै भएपछि मैले करिअर अगाडि बढाउन नसक्ने देखें । हरि र इन्द्रको पनि बच्चाको कारण द्वन्द्व चर्किरहने देखेँ । त्यसैले उता बाबु आमाको अनुरोधमा म नेपाल गए भनेर आफ्ना साथीलाई अवगत गराएँ । त्यहाँ भएका सबै घटनालाई मैले अभिभावकलाई भनिरहेको थिएँ । नेपाल आएपछि मलाई अस्ट्रेलिया जाँदा लोन दिएर सहयोग गर्ने मेरा बाबाको साथी भेट्न आएँ । उहाँको छोरा थिए । जो मेरा क्लास मेट पनि  । तर मलाई थाहा थिएन बुबाले उसको बुबासँग सहयोग माग्नुभएको कुरा । लोन तिर्न बाँकी थियो या थिएन मलाई मेरो बाबा–आमाले केही भन्नुभएन । कानुनी रूपमा मेरो कसैसँग बिहे भएको थिएन । अध्ययन गर्न जाँदा मलाई सहयोग गर्नेले मबाट सहयोग लिन चाहेछन् । एक दिन आमा–बाबाले सम्झाउनुभयो । छोरालाई यहीँ छोडेर अर्को केटासँग पेपर म्यारिज गरी म अस्ट्रेलिया जानुपर्ने भयो । ममाथि कसैले गरिदिएको उपकारको बदलामा मैले उपनिवेशसँग पेपर म्यारिज गरें । छोरा छोडेर हामी दुवै अस्ट्रेलिया गयौँ । उपनिवेशलाई मैले सँगै आफ्नै कोठामै लिएर गएँ । छोरा आमा–बाबाको साथमा थियो । म ढुक्क थिएँ । उसको अति नै न्यास्रो लाग्थ्यो समय समयमा । म डिग्री ज्वाइन भएँ । हप्ताको पाँच दिन काम गर्थें । उपनिवेश उता नेपालमा पढाइ छोडेर बिग्रेर बसेको रहेछ । उसले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने विश्वासका कारण पनि मैले पेपर म्यारिज गरेर यहाँ ल्याइदिने मात्रै सर्त थियो । उसले काम पायो । पैसा कमाउन थाल्यो । थोरै समयमा उस्ले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्यो ।
देश काल समय परिस्थितिसँगै ऊ परिवर्तन भयो । तर अब उस्ले मलाई विस्तारै अंकुश लगाउन थाल्यो । मेरो निजी स्वतन्त्रतामाथि उसले आफ्नो हक कायम गर्न खोज्यो । म जता गए पनि उसले शंकाको नजरले हेर्न थाल्यो र पतिको हक देखाउन थाल्यो । तिमीले मेरो नाउँमा सिन्दुर पोते लगाएर हिंड्नपर्छ भन्नेसम्म कुराहरू गर्न थाल्यो । यो कुरा मलाई असह्य हुन्थ्यो । यो बीचमा हरिमा मैले व्यापक सुधार आएको पाएँ । ऊ कलेज जाँदैनथ्यो । लागू पदार्थ खान्थ्यो । रक्सी खैनी गुडका खान्थ्यो । अब ती कुराहरू छोडेर कलेज जान थालेको पाएँ । मलाई केही आपत् पर्दा उसले सहयोग गथ्र्याे । ऊ आफू पनि कन्फ्युजमा थियो कि छोरा उसको थियो कि थिएन भन्ने ।म कति अभागी थिए जो पनि केटा साथी भेट्थेँ सबैको उद्देश्य अन्ततः पिआर र सेक्समै आएर जोडिन्थ्यो । सबैले आफ्नो देशलाई भुलेर अलिक कमाएका पैसा पनि उतै राम रमाइलोमा सकेका । सबै दुःखी देख्थेँ म । हप्ता–हप्तामा आउने स्यालरी हप्तान्तमै सक्थे प्रायले ।
कानुनी रूपमा उपनिवेश आफूलाई बलियो साबित गर्न चाहन्थ्यो र उसको लागि मैले पिआर एप्लाई गरिदिनपर्छ भनेर जबर्जस्त गर्न थाल्दै थियो । म हरेक कुराबाट बचिरहेको थिएँ । मैले आफूलाई ऊबाट असुरक्षित महसुस गर्दै गएको थाहा पाएँ र कोठाबाट निकालें । ऊ अन्तै साथीकोमा गयो । उसको मुख्य उद्देश्य थियो मेरो नाउँबाट पिआर लिने । ऊभित्रको मुख्य सपना मात्रै पिआर लिने थियो । मैले ऊसँग डिभोर्स मागें । उसले दिन मानेन । पिआर लिएपछि मात्रै डिभोर्स दिन्छु भन्ने कुरा गर्न थाल्यो । हामीबीच झगडा र लफडा हुन थाल्यो । मलाई कोठामै आएर पनि धम्क्याउन थाल्यो ।
एकदिन मैले मोबाइलमा बैंक कार्डको पिन नम्बर लेखेकी थिए । उसले देखेको रहेछ । मेरो एटीएम काडबाट सबै पैसा निकालेछ सब साथी जम्मा गरेर रक्सी पार्टी गरेछ । दुई महिनाको स्यालरी जम्मा गरेको थिएँ । कलेज फि पनि तिर्नु बाँकी थियो । यी सबै घटनाबाट मैले ऊभित्र उद्दण्डता र गुन्डागर्दीबाहेक केही देखिनँ अस्ट्रेलियाको कानुनमा हामी लोग्ने स्वास्नी थियौ । तर व्यवहारमा पूर्ण एक अर्काका शत्रु भयौँ । जेलबाट फेरि इन्द्र पनि छुट्यो । मलाई झन तनाव हुन थाल्यो । म यो द्वन्द्वबाट कसरी मुक्ति पाउने भनेर सोचिरहेकी थिएँ ।उपनिवेश पहिला आफूले गरेको सहयोगको कारण मैले उसको लागि जे पनि गर्न पर्छ भन्ने भ्रममा थियो । त्यो भ्रम तोडिदिनु मेरो कर्तव्य पनि थियो । उसको अहंकारलाई अन्त्य गर्दै उसको बाँकी ऋण मैले तिरिदिएँ र आइन्दा मेरो पछि नलाग्ने शर्त गराउँदै डिभोर्स गराएँ । वकिल राखेर सबै पेपर मिलाइयो र एकप्रति पेपर नेपालको जिल्ला अदालत पनि पठाइयो । यो परिस्थिति कसरी जन्मियो यसको कारण भनेकी थिए मैले हरिलाइँ । मेरा हरेक आपत–विपत्मा हरि मेरो सहयात्री भएर आइरहेको थियो । जेलबाट निस्किएपछि इन्द्रले छोरा दाबी गरेर मैले छोरा बेपत्ता पारी भन्ने आरोप लगायो । छोरा उसैको हो भन्ने भ्रममा ऊ किन थियो भन्दा हरिकोबाट म इन्द्रकोमा जाँदा मेरो महिनावारि रोकिसकेको थियो तर म इन्द्रकोमा जाँदा आफूलाई केही समय भए पनि बचाउन मैले पर सरेको बहाना गरेकी थिएँ ।
तर पछि परिस्थिति जन्य घटनाका कारण इन्द्र र मेरोबीच शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो । जतिबेला मेरो मिन्स डेट नाघेको एक महिना भइसकेको थियो । सन्तान कसको हो आमा मात्रै त्यो गुप्त रहस्यको एक मात्रै जानकार हुन्छे । हरि शान्त छ । ऊभित्र मैले मेरो जिन्दगीको लागि चाहिने खुसीको स्रोत देख्न थालें । इन्द्रमा स्वार्थ थियो । पिआरको सपना र मेरो यौवन अनि मेरो प्रगतिप्रति उसलाई लोभ थियो । पुरुष सम्झन्छन् आफूले शारीरिक सम्पर्क गरेपछि त्यो महिला सधैंको लागि उसको दासी भएर बस्न पर्छ । यो हरेक पुरुषको भ्रम हो । पहिलो चोटि मैले नेपालीहरुले आयोजना गरेको सांगीतिक स्टेज प्रोग्राममा भाग लिएको थिएँ । त्यो कार्यक्रममा मैले प्रस्तुति दिनुथियो । अरु थुप्रै नेपाली थिए । त्यो स्टेज प्रोग्राममा इन्द्र पनि सहभागी थियो । हरि र मैले एउटा नेपाली गीतमा सँगै नाच्यौँ । इन्द्रलाई त्यो कुरा असह्य भएको रहेछ । उसले स्टेजबाट नै मेरो श्रीमती मेरी छोराकी आमाले परपुरुषसँग मेरो अनुमति नै नलिई नाच्नु कति जायज हो भने सबलाई भन्यो ।
हरि र इन्द्रबीच द्वन्द्वको स्थिति खडा भयो । छोरा कसको हो भनेर दुवैले दाबी गरिरहेको त्यो परिवेशमा मैले छोरा जन्मिएको बेलामा नै क्युइन्स मेरि हस्पिटलमा हरि जो सहयोगी बनेर आएको थियो रगत दिनप-यो भने काम लाग्छ भनेर ब्लड क्रस म्याच गराउँदा डिएनए परीक्षण गराइसकेको थिएँ र बच्चाको पिताको नाउ हरि थापा भनेर प्रमाण लिएको थिएँ । यो कुरा हरिलाई पनि थाहा थिएन । हमेसा त्यो रिपोर्टलाई मैले आफ्नो ब्यागमै हालेर हिँड्थे । यसरी वर्षौंदेखिको एउटा मुद्दा र रहस्य मैले अन्त गरिदिएँ । पिआरको सपना देखेर छोरा दाबी गर्दै आएको इन्द्रलाई मैले राम्रैसँग भनिदिए स्टेजबाट नै । पिआरको सपनामा बाँचिरहेका तमाम नेपालीबीच मैले आफूले पाएको पिआर पनि त्यागेर आफ्नो पढाइ पूरा गरी केही समयपछि नेपाल नै फर्किन लागेको कुरा गर्दा उपस्थित सबै नेपाली विद्यार्थीको ताली पाए ।
सबैले हरिजीको हात समातेर मेरो हात माथि थमाए । हरिजीले पनि भन्नुभयो कि एउटा असल व्यक्तित्व निर्माणका लागि हामीले वन्दनाजीबाट नै सिक्नुपर्छ । अब यहाँको पिआरभन्दा पनि हाम्रै देश नेपालको प्यार पाउनका निम्ति हामी दुवै नेपाल जाने योजना बनाएका छौं । यहाँ शिक्षा आर्जन गर्ने नेपालमै गएर यो शिक्षाको उपयोग गर्ने । हाम्रो सपनाको देश नेपाल पो हो त यहाँ शिक्षा आर्जन गर्ने ज्ञान हासिल गर्ने अनि त्यसको उपयोग नेपालमा गर्ने भिडबाट ताली आउँछ । तृष्णाले हरिलाई छोडेर फेरि अर्कैसँग सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । सम्धी–सम्धिनाको त्यही भिडमा भेट हुन्छन् । तृष्णाले अर्पणसँग माफी माग्छे । र भन्छे, ‘म पनि पिआरको आशले बरबाद भएँ’ अर्पण र कविता अनि कमल केसी त्यहीँ हुन्छन् । कमल पनि आफ्नो छोरालाई सम्झाउछन् पढाइ पूरा भएपछि तिमी पनि उतै आऊ नेपाल नै हो हाम्रो सपनाको देश । (आर्थिक दैनिकबाट)